Chọrọ Downgrade si iOS 9 iOS 8.4? Olee otú ime ya 8
Part 1. Gịnị mere chọrọ downgrade si iOS 9?
Part 2. ndabere iPhone / iPad tupu iwepụ si iOS 9
Part 3. Nzọụkwụ downgrade iPhone / iPad si iOS 9 iOS 8.4
Part 4. Weghachi data si iTunes / iCloud ndabere
Dị ka ị na-ahụ, music, video, foto na akwụkwọ faịlụ na-echekwara na SD kaadị nke Samsung Galaxy S5. Ekele Android emeghe ọdịdị, ndị a ọdịnaya na-ọma inweta. Nkwado ndabere na mpaghara dị otú ahụ ọdịnaya, ị dịghị mkpa software ma a eriri USB. Gụọ ihe ndị na-esonụ ndị nduzi iji hụ otú ndabere Samsung S5 ka PC.
N'agbanyeghị eziokwu na iOS 9-atụ anya ga juru n'ọnụ na oké ọhụrụ atụmatụ, e nwere ndị ka ụfọdụ n'ime anyị ndị na-agaghị chọrọ ịnọgide na iOS 9. E nwere ọtụtụ ihe ị ga-achọ downgrade ka iOS 8. Ụfọdụ n'ime ha na-agụnye ;
Nwere ike ị gaghị niile na masịrị ọhụrụ atụmatụ na iOS 9 nwere na-enye ma na ị chọrọ ka laghachi ụzọ ngwaọrụ gị na-arụ ọrụ n'ihu.
Ụfọdụ nke gị ngwa nwere ike na-arụ ọrụ n'ụzọ ha na-eji na iOS 8 na ị chọrọ inwe gị na-arụpụta ngwa azụ dị nnọọ ka ha na-eji arụ ọrụ.
Ị nwekwara ike na-ahụ na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ a obere nwayọọ nwayọọ na ọhụrụ iOS 9 ị chọrọ ka gị na ngwaọrụ azụ ya ịrụ ọrụ ebube.
Ndị a okwu ndị bụ n'ezie a otutu nkịtị karịa ị na-eche ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị chọrọ downgrade ijide n'aka na-eme ya nnọọ n'oge tupu Apple akwụsị ịbanye ndị okenye iOS 8 version. Ha a na-eme nke a ụbọchị ole na ole mgbe atọhapụ ndị ọhụrụ iOS.
Tupu ị nwere ike downgrade ka iOS 8, i kwesịrị ndabere ngwaọrụ gị. Ị pụrụ ime otú iji iCloud ma ọ bụ iTunes. Onye ị na-ahọrọ bụ kpam kpam ruo gị dị nnọọ ka ogologo dị ka ị hụ na ị na nkwado ndabere na mpaghara ngwaọrụ gị. Iji ndabere na iji iCloud enweta na Ntọala> iCloud> ndabere na-anọ na Wi-Fi njikọ ruo mgbe usoro zuru ezu.
Iji ndabere na iji iTunes Jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa gị ma wee pịa na File> Devices> ndabere. Na-na ngwaọrụ gị ejikọrọ ruo mgbe nkwado ndabere na mpaghara na dechara.
Ugbu a na ị nwere ndabere nke ngwaọrụ gị, ọ bụ oge downgrade azụ iOS 8.
Ọ dị mkpa ka banyere na iOS 8 nwere ike ịbụ ebe a ụbọchị ole na ole mgbe iOS 9 ụgbọ mmiri. Ya mere ọ bụrụ na i chere na ị pụrụ akwa ụta na kwalite ka iOS 9, ọ bụ ezi echiche iji nwere oyiri nke iOS 8 faịlụ ka biaghachi azụ. Iji chọta a oyiri-eso ụzọ: yourusernamefolder / Library / iTunes na n'ime iPad software mmelite ma ọ bụ iPhone software mmelite, chọta iOS 8.4.2.ips faịlụ.
Iji weghachite iOS 8, dị nnọọ ikwunye ngwaọrụ gị n'ime kọmputa gị na ẹkedori iTunes. Chọpụta ipsw faịlụ anyị kwurịtara banyere n'elu na imeghe ya. iOS 8 ga-eweghachi ekwentị gị ọ bụ ezie na gị niile ndị na-abụghị ngwaahịa ngwa ọdịnala na data ga-ehichapụ na usoro.
Anyị kwesịrị kwukwara na n'ihi ihe ụfọdụ Mac ga ihichapụ ipsw faịlụ otú i nwere ike na-enweghị ndị ọhụrụ otu.
O di nwute na ị ga-enwe ike iweghachi gị iOS 9 data ka iOS 8.4 otú a nwere ike ịbụ a nsogbu. Mgbe downgrade ngwaọrụ gị ga-apụta ohuru otú ị pụrụ ịdị mkpa ka naghachi gị data si iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere-eme ka ọ na-arụ ọrụ na iOS 8.4.
Ị pụrụ ime otú iji Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone data mgbake). Dr. Fone bụ a otu nkwụsị ngwọta-enyere gị aka naghachi gị niile ehichapụ kọntaktị, ozi, foto, ndetu na ndị ọzọ na data gị iOS ngwaọrụ. Nke a bụ software ị na-aga mkpa ma ọ bụrụ na ị na-aga na-agbake gị niile iOS 9 data na gị iOS 8. Nke a ngwa-arụ ọrụ na-agbake data ma ị na mberede ehichapụ ya ma ọ bụ gị iOS E merụrụ dị ka ọ mgbe ị downgrade. Ka anyị hụ otú iji ya.
Olee otú wepụ na naghachi data si iTunes ndabere
Nzọụkwụ Otu: anya isi na ị ibudatara na arụnyere Wondershare Dr. Fone gị na kọmputa. Agba ya wee pịa on "naputa site na iTunes ndabere faịlụ" Họrọ nri ndabere faịlụ si dị ndị wee pịa on Malite iṅomi.
Nzọụkwụ Abụọ: All nke kụziri-elu data ga-egosipụta na-esote window. Họrọ ndị ị ga-achọ naghachi wee pịa on "naghachi" na-azọpụta ha.
Olee otú iji weghachi si gị iCloud ndabere
Ebe a bụ otú ime ya ma ọ bụrụ na gị ndabere bụ na iCloud.
Nzọụkwụ otu: mgbe na-agba ọsọ Wondershare Dr. Fone, họrọ "naputa site na iCloud ndabere faịlụ". Ị ga-achọrọ t tinye iCloud na aha njirimara na paswọọdụ.
Nzọụkwụ Abụọ: Ị ga-ahụ mkpa ibudata iCloud ndabere faịlụ. Ozugbo ị na-ite ke, ngwa ga-ahụ niile iCloud ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye ị chọrọ iji naghachi na pịa "Download."
Nzọụkwụ atọ: Na popup window na-egosi, họrọ faịlụ na ị ga-amasị ibudata. Mgbe i kwesịrị iṅomi iCloud ọdịnaya. Dị pịa na iṅomi Button.
Nzọụkwụ anọ: Ozugbo Doppler bụ zuru ezu, ị ike ihuchalu data na gị iCloud ndabere faịlụ ma weghachi ya na gị na iOS ngwaọrụ.
> Resource> iOS> Chọrọ Downgrade si iOS 9 iOS 8.4? Olee otú ime ya